Ngaphi na ndiyakuthisa umntwana?
Ukuhlawula umnyaka wokuqala wokuphila komntwana kubaluleke kakhulu, kuba ngeli xesha lobomi isiseko sempilo kubomi bonke ubomi. Ingane iyakwazi ukuhamba, ukujika, ukunyuka, ukuhlala, kunye nokusikwa kwe-massage kunceda ekuqiniseni nasekuphuhliseni zonke iinkqubo kunye nezitho, kuba liqinisekisa ukusebenza komqhubi womntwana. Ukuba ekuzalweni komntwana nayiphi na inkqubo ye-pathological (eg, torticollis, hip dysplasia, njl.) Zifunyenwe, kuba ngenxa yokuxubusha ukuba ukuphuhliswa kwengqondo kunokuphepheka, kuba ekutshatsheni kwamanye amashishini angaphambuki kakuhle.
Ngokutsha-mama uhlala ebuza imibuzo yolu hlobo: "Kufuneka ukuba kuninzi kangakanani ukucoca umntwana, yintoni ubude benkqubo, yintoni inamba efunekayo yeenkqubo eziyimfuneko?" Iingcali zincoma ukuba i-massage yenziwe ngumntwana, ngokuqhelekileyo kwimizuzu yekota, ukuba kukho Ugqirha. Ukuba iikhosi ziqhutyelwa kaninzi ngaphezu kwesinye kwikota, ikhosi yokusila ngokuphindaphindiweyo ibanjwe ngekhefu kwithuba lenyanga enye.
Iseshoni isusela kwiminyaka engama-20 ukuya kwi-40-45 imizuzu. Ekuqaleni kwekhosi, ubude bayo bufutshane, kwaye bukhula kancane kancane. Ukunyamezela kunye nobude bokuxilisa kuxhomekeke kwintsana: ezinye iintsana ziyakhathala ngokukhawuleza, kanti ezinye zenza umxhelo ngomzuzu 40-45. Ikhosi eqhelekileyo yokusilalisa iqulethe, njengomthetho, iiseshoni ezili-10, kodwa ngokuqinisekileyo ukuguqulwa kwamandla kubonakala kwiseshoni ye-12-13.
Ngoko ke, ukuxilisa umntwana omncinci akulula ukwenza, kodwa kufuneka uyenze rhoqo kunye nekhefu lokuphumla. Ekubeni ukuhlalisa umzimba ngumthwalo othile kumzimba wonke, kukho indawo yokuphefumla iyadingeka ukuze umzimba womntwana ungaphinde ufike emva komthwalo.
Ziziphi izitofu ezenza abantwana kwiminyaka engama-6
Xa amazinyo ebisi aguqulwa ukuya kusekho
Indlela yokufumanisa kwangaphambili i-dyslexia
Ndingayazi njani uhlobo lwesifo somntwana?
Ngaba kunokwenzeka ukuqonda i-Down's syndrome emva kokuzalwa komntwana
Ukulungiswa ngokwenyama yabantwana abane-cerebral palsy
Siphatha amaqanda kubantwana
Ukuthambekela kwezinto eziphathekayo kwiikhonkwane ezimfutshane 2016
Yifumene ne-mascarpone kunye nobusi
Ukupheka ukutya okumnandi kwintsapho
Iindlela zokupheka ezona zilungileyo zoNyaka omtsha: ikhekhe kunye ne-walnut kwiTable yeNtsha
I-Supermodels yabelana ngeemfihlelo zezidlo zabo
Iipropati ezisebenzayo zesardadi
Ikhekhe le-oat flakes
UMiguel wathetha ngokunyanisekileyo ngobomi bakhe
Kutheni sifuna i-magnesium emzimbeni?
Iipropati eziwusizo zama-walnuts
Umbala obomvu ngaphakathi
Isimo sezulu eMoscow nakummandla waseMoscow ngoNovemba ka-2016 - ipropati echanekileyo kwi-Hydrometeorological Centre
Kutheni umntwana ezele kunye nendlela yokujamelana nayo?
Isaladi zendabuko yehlabathi lezolimo
Inkqubo yokuzala unina
Imifuziselo yefestile entwasahlobo nasehlotyeni ka-2011
Ukuphulukisa iipropati ze-chaiber